जापानबाट जम्मा एकजना नेपाली लिएर आउदै वाइडबडी जहाज, को हुन् ति भाग्यमानी ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/जापानबाट जम्मा एकजना नेपाली लिएर आउदै वाइडबडी जहाज, को हुन् ति भाग्यमानी ?
जापानबाट जम्मा एकजना नेपाली लिएर आउदै वाइडबडी जहाज, को हुन् ति भाग्यमानी ?
काठमाडौं, २९ वैशाख । जापानले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भोलि मंगलबार ओशाका उडाउने भएको छ । जापानले नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक आरएको वाइडबडी जहाजबाट ती नागरिक स्वदेश लैजाने गरी एयरक्राफ्ट भाडामा लिइसकेको छ । उता जापानमा रहेका करिव ५० हजार नेपाली आफैं पैसा तिर्छौं, देशमा छिर्न देऊ भन्दैछन् । तर, स्वास्थ्य, परराष्ट्र हुँदै गृहसम्म यस्तो अनुरोध पुग्दा अस्वीकृत भएको छ ।
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली यताको सरकारसँग आगो भएका छन् । किनभने, जहाजको भाडा आफैँ तिर्छौं भन्दा पनि अष्ट्रेलियन नागरिक लिएर उडेको नेवानिको जहाजले उनीहरुलाई ल्याएन । त्यसरी आउन चाहनेहरुले पिसिआर विधिबाट कोरानोमुक्त रहेको प्रमाणित गरिसकेका छन् । तर, आफ्नो देशले आउन दिएन ।
उता, समस्या छ, कुवेतमा । त्यहाँ अलपत्र परेका ३५ सय नेपाली अहिले खुला चौरमा टेण्ट टाँगेर बसेका छन् । खाने, पिउने सुविधा छैन । बाटो हिँड्ने मान्छेले दया गरेर केही फयाँके खायो, नत्र भोकै ।
उनीहरु विभिन्न अभियोगमा त्यहाँको जेलमा कैद थिए । तर, कोरोना संक्रमणपछि कुवेतले सबै विदेशी अभियुक्तलाई आममाफी दिई आ–आफ्नो देश फर्किन भन्यो । त्यसमा नेपाली परे, ३५ सय ।
अहिले गृह मन्त्रालयमा कुवेतको चिठी अलपत्र परेको छ । कुवेत भन्दैछ, ‘तिमी लैजान सक्दैनौ भने हामी पठाइदिन्छौँ ।’ गृहले ती नेपालीबारे अध्ययन गर्यो । उनीहरु नेपालको विभिन्न ७० जिल्लाका बासिन्दा छन् । सबभन्दा ठूलो खतरा छ, तिनले कोरोना बोकेर आउने । यहाँ एकैचोटि ३५ सय मानिसलाई राख्ने क्वारेन्टाइन छैन ।
तर, भारतबाट छिरेका व्यक्तिहरुलाई यस्तै तरिकाले नेपालमा छिर्न दिँदा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय २१ पुगिसकेको छ । अब खाडीका नेपाली छिरायो भने कति छिर्ला ? यही प्रश्न तेर्सिंदा विदेशमा रहेका नेपालीको बिचल्ली कायमै छ ।-जनआस्थाबाट
चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्षमा अभिनेता निखिल उप्रेतीले दरखास्त दिने
आन्तरिक उडान खोल्ने तयारी ,यसरी गरीयो पुर्व अभ्यास